Maxaad ka taqaan Taariikhda Muuse Ganjab iyo Yusur Abraar. – The official Somali Historical
Maxaad ka taqaan Taariikhda Muuse Ganjab iyo Yusur Abraar.
Mudo haatan laga joogo 30 sano ayaa waxaa dhacdey in maalin Madaxweynihii hore ee Soomaliya Maxamed Siyaad Barre socdaal ku maray qaar ka mida xaafadaha muqdisho isaga oo ay la socdaan inyar oo Ilaaliyeyaashiisa u gaarkaa ka mid ahaa, markuu maraayo Dalcada Aadan Cadde ee degmada wardhiigleey ayuu arkay Guri Dabaq ah oo jidka dhiniciisa ku yaala ,
Markaasuu waydiiyey Ragii la socdey oo gurigaan Quruxdan badan yaa dhistay, waxaa lagu yiri Col. Shariifbaa iska leh, madaxii Laanta Canshuuraha ee dekeda Muqdishu, oo marar badan loo sheegay madaxweynha inaanu ahayn nin laaluush qaata oo tuug ah. Waxaa uu yiri hadal Tariikhda galay oo ah ” Shariif Tuug ma ahan ha iga harto “.
Hadaba waqtigan iyo Madaxweyne Xasan sheikh markaan eegno wax badan ayaa ummada soomaliyeed laga gaday in xasan sheekh maxamuud aanu ahayn nin Xoolaha Umada dhaca. Waxaase Xaqiiqa noqotey in taasu ay hartay maanta kadib.
Bal aan ugu horeyn eegno ” Xagee ka timid fadeexada Bankgiga .
Taariikhda Muuse Ganjab iyo Yusur Abraar.
Muuse ganjab, waxaa ganacsade u dhashey Beesha wacaysle-abgaal waxeyna Oori wadaag yihin madaxweyne Xasan sh. Maxamoud , oo xaasaskoodu ay wada dhasheen, waxaa uu ka soo jeedaa qoys caan ku ah ciyaaraha.
Ganacsigiisa waxuu ku wajahan yahay hubka iyo isgaarsiinta waxa uu degan yahay dalka koonfur afrika,
Haweeneyda Gudoomiyaha ka noqotey Bangiga Dhaxe ee Somaliya yusur Abrar iyo Muuse Ganjab waxey isku barteen dalka Gaaboon isagoo halkaas ku lahaa shirkad xaga telefoonada ah.
Yusuur Abraar waxaa ay shaqo u tagtay Gaaboon shaqooyinkaas oo la xiriiray Dhinaca Bankiyada,
Dhinaca kalena Muuse Ganjab iyo Gudoomiyihii Bangiga dhexe ee is casiley Cabdisalaan Hadliye waxey ahaayeen Rag isku xiran waxuuna Muuse Ganjab uu lug ku lahaa Magacaabistiisii.
Waxyaabihii ugu waaweynaa ee uu xilka ku waayey Mr hadliye waxaa ka mid ahaa in isaga iyo labo ka mid ah shaqaalaha dowlada oo ka kala tirsan wasaarada gaashaan dhiga iyo wasaarada maaliyada ayna is xigaan madaxweyne Xasan sheekh in ay lacag 12 milyan oo Dolar ay Bankiga ka qaateen.
Markii ay Fadeexadaas dhacdey oo Gudoomiye Cabdisalaan Hadliye Xilka uu iska Casiley waxaa uu Ganacsade Muuse Ganjab mar kale uu ku guuleeystay in Yusur Abraar loo magacaabo Gudoomiyaha Bankiga dhexe si uu meeshii uga sii wato boobkii dhaqaalaha wadanka waqti Mushaar la’aan ay heeyso shaqaalaha dowlada iyo ciidamada .
Mr Ganjab waxaa uu mar kale isku dayey inuu heshiis kula galo Gudoomiye Yusur Abraar in isaga looga danbeeyo soo Xareynta lacagta soomaliya ay laheyd ee dibada ugu maqan 20,kii sano ee la soo dhaafay . waxaa sidoo kale hehiiskaas ku jiray Jamaal guutaale (HG-Saleebaan) , oo soo xirxiray heshiiska Shirkadda Shulman, Rogers, Nuurto sh maxamoud oo ah madaxweynaha walashiis-Madaxna ka ah NGO Sidii wasaarad oo kale u shaqeeysa. Wiil walashiis dhashay oo lagu shaqaaleeyey agaasime ku xigeenka madaxtooyda.
Markii ay arintan ka shireen waxaa lagu heshiiyey in Marwo Yusur lagu war geliyo in lacagtaas meel la isla ogyahay lagu shubo taasoo ah account uu leeyahay Musse Ganjab oo ku taalo south Africa. Si Madaxweyne Xasan sheekh uu s i gaar ah ugu furdaamiyo arimahiisa u gaarka ah.
Sida wararku sheegayaan madaxweynhuhu arintaas wax buu ka ogaa. Dadka dhacan u heshiiyana Hareerihisa ayey fadhiyaan waana qaraabo aan waxba laga qaban Karin. Yusur abraar arintan wax bay ka ogeeyd laakiin markii ay aragtay qiyaas la’aanta meesh taalo iyo baaxada lacagta ay leedahay ayeey waxa isku dayday inaay u sheegto madaxweynaha maadaama uusan jirin Ra,iisal wasaare wax loo sheegi karo oo awood leh markaas .
Waxaa dhacdey in qaar wasiirada Xukuumadii Saacid ka mid ahaa ay Marwo Yusur Abraar u sheegeen in arintaan aanay waxba ka qaban Karin madaxweynahana uu wax ka ogyahay kuna dhihi doono. la shaqee Muuse Ganjab tasoo macnaheedu “yahay aniga ayuu iga wakiil yahay” marki ay arinta u sheegtay sidii ayuu ku yiri.
Yusur maxay la carartay !
Waxaa dhacdey in Yusur rag madaxtooyda dowlada federaalka ah ay ugu hanjabeen in la dili doono hadii aysan lacagta oo dhan ku shubin account loo qoray ee first Rand bank orn Nedbank accounts .
Waxaa kaloo jirtey in waqtigii uu joogay Gudoomiyahii iska Casiley Bangiga Dhaxe Cabdisalan Hadliye lagula heshiiyey in lacagta uu Muuse ganjab ku yeesho 10% , Shulman, Rogers, Gandal, Pordy & Ecker 30% , shaqsiyaad kale 30% percent . Dowlada soomaliyeed wax ka yar 4%
Hadaba iyadoo xaalada ay halkaas mareyso ayaa Waxaa Yusur Abraar ay xiriir hoose la sameeysay saaxiibadeed ka yimid waqooyiga somaliya oo ay ugu horeeyso Fowsiya Yusuf Xaaji Aadan oo aheyd Wasiirka Arimaha Dibada Somaliya waxaana dhacdey in foosiya ay ku amartay in Yusur ay howsha fuliso. Maadaama ay magacaabideeda wax ku lahayd.
laakiin Rag Mucaarad ahaa kana soo horjeeday siyaasada xasan sh iyo damu jadiid ayaa waxeey Yusur Abraar kula taliyeen inaanay ogolaan dhaca xoolaha ummada Soomaaliyeed waxaase Gudoomiye Yusur aysan marna ka fikirin in gabadha xamar lagu dili karo waqti kasta. Waxaa ay markaa la xiiirtay safaardaha Mareykanka ee Nairobi iyo Dubai kadib markii ay u dhaarteen willasha aan wax u taliya la aqoon ee xasan sh Maxamuud uga shaqeeya Madaxtoyadiisa.
Waxaa lagu waaniyey inaay sida ugu dhaqsaha badan xamar uga dhoofto Saacado ka dibna dalka waa ay ka carartey Yusur iyadoo Banaanka soo dhigtey Fadeexada ay la kulantey si gaar ahna ugu wajahneyd Madaxweynaha . waxaaana dhacdey in lagu qalqaalinayey in dib loogu caro celiyo xamar si looga fushado howlaha dhaca iyo boobka madaxtooyda laga abaabulay, waana iska diiday.
Wararku waxay sheegayaan in Muuse Ganjab xamar iskaga carary kadib markii arintaan ay banaanka timid. Madaxweynuhuna uu codsady in laga aamuso aan laga hadlin kadibna ay iska dhiman doonto hadal heeynteeda bilaha soo socda .
Xasan sh maxamud wax qabad l’aan waxaa uu ku darsaday . qaraabeeysi beeleed, qabyaalad ummada lagu qaybiyo ilaa jufad ugu sareysa iyo tan ugu hooseeysa , beelaha qarkoodna laga ilaaliyo awooda qaranka , in laga fogaado aqoon yahanada dibada ka yimid maadaama aan la qiyaani Karin, si fududna aan loo xakameeyn Karin, dhaca iyo boob xoolaha ummada soomaliyeed oo loo adeegsado dhacooda shaqsiyaad saaxiib la ah, ama qaarabo la ah iskana dhigo inaanu shuqul ku laheeyn isla markaasna aanu eryin oo ay la joogaan maadaama uu isagu diray markii horeba.
Fadeexooyinka kale ee Dawlada Xasan sheikh ay ku kacdey waxaa ka mid ah in Dowlada Mareykanku ay soo ogaatay in cuntada ay ciidanka ugu talo gashay ( meals Ready to eat or MRE) Laga gado ururka Alshabaab. Taaso lagu arkay ciidamo alshahaab ah oo wata Cuntadii loogu tala galay ciidanka qaranka waxaa arinta fuliyey wiil yar oo ah taliyaha taakuleeynta ciidanka xooga dalka soomaliyeed Cabduqadir Macalin nuur.
Sida la ogyahay ciidan uu leeyahay Qaranka Soomaaliyeed kan maanta jira lagu tilmaami Karo waxaana ay yahiin ciidan beeleed waa yaabee Hadii aan Ciidan Qaran oo Rasmi ah uusan jirin dowladi ma jiri kartaa Jawaabtu waa maya.
( Dad waxa u liita nin aan taladiisu ku fileeyn mid kalana qaadan )
Guul darooyinka ku habsadey Shacbiga Soomaaliyeed waxaa ka mid ah in marka horaba soomaali wax ka sugto Madaxweyne NGO ah, Saaxiibadis iyo Qaraabadiisu ay NGO, yihiin, inagoo go NGO leey inay jecelyihiin inaan dowladi jirin waayo waxaa ay ku jiraan kaalintii dowlada , wixii soomaali loogu talo galayna waxaa qaybsada NGO iyo kuwa Beesha Caalamka wax u soo dhiibto ee degan Nairobi, Addis-Ababa, Roma iyo Bruselles .
Madaxweyne Xasan Sheekh Maantadan aan joogno isaga iyo walaalkiis Cali sh maxamuud ( Cali sheemo } . waxaa ay u istaageen dhaca xoolaha ummada waxaana ay Magaalada Muqdisho kaga Iibsadeen Guryo aad u waaweyn , gaara haan Xeebta Liido oo ilaa afar guri uu ka iibsadey Sanadkii la soo dhaafay waxuu kaloo Guri Qasri ah uu ka iibsaday Dalka Turkiga iyadoo dhowr kalana Baadigoob loogu jiro in laga iibiyo Dubai.
Ugu dambeyay, waxaa Cadaatey in Madaxweyne Xasan sheikh uusan aheyn Masuul Qaran ee uu yahay Nin xoolo boob meesha u yimid sidoo kale marka la eego hab dhaqankiisa maahan nin raba inuu dowlad iyo syatem dhiso ee waa nin rabo inuu dib inoogu celiyo hogaamiye kooxeedkii la tirtiray , Beeleeysi , iyo gumeeysi cusub oo uu Soomaaliya uu ku soo Hogaamiyey. Waxaan Qoraalkeyga ku soo Gaba Gabeynayaa Soomaliyeey intaaas ha idinkga filnaato NGO President.
Previous: Taariikhda Halgamaa Cabdullaahi Ciise Maxamuud
Next: Drs. yusur Abraar oo noqotay masuulkii u horeeyay Taariikhda Somaliya ee xilsare oo loo dhiibay iska casisha